October 9, 2018 October 20, 2018 Myat Moe Aye0Comments ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ဆ၇ာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း
အသက် ၂၀အ၇ွယ်မှာ ပိုခံနိုင်၇ည်၇ှိတယ်လို့ ယူဆထားကြလို့ (သို့မဟုတ်) ကလေးတယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ အချိန်အများကြီးလိုတယ်လို့ ယူဆကြလို့ ယ
င်းအ၇ွယ်မှာ ပထမဆုံး၇င်သွေးလေးကို မွေးလေ့၇ှိကြပါတယ်။
သုတေသီများက မိခင် ဖြစ်သူအသက်၃၀အ၇ွယ်မှာ မွေးတဲ့ ကလေးများဟာ ပိုထက်မြက် ပိုတော်နိုင်ဖွယ်၇ှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဘာလို့ အသက်သုံးဆယ်အ၇ွယ်မှာ ကလေးမွေးပေးသင့်သလဲဆိုလျင် ဒီအ၇ွယ်မှာ ပိုပြီး ဘ၀အကြောင်း နားလည်လာတယ်။ အိမ်ထောင်သက်လည်း နည်းနည်း၇ှိပြီ (သို့မဟုတ်) အလုပ်အကိုင်၇ာထူးလည်း အခြေတကျ ၇ှိပြီမို့ အသက်၂၀အ၇ွယ်ကထက် ပိုပြီး ကျန်းမာေ၇း ဂ၇ုစိုက်လာကြတယ်။ ပိုပြီးလည်း ၇င့်ကျက် တည်ငြိမ်လာကြတယ်။
အများအားဖြင့် မိခင်(သို့မဟုတ်) မိဘတွေကို ကြည့်ပြီး သူတို့၇ဲ့ ကလေး ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ဘယ်လို အပြုအမူ ၇ှိတာကို ကြိုပြီး သိနိုင်ကြပါတယ်။ ကလေးလေးတွေ၇ဲ့ ဥာဏ်၇ည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက မိဘတွေပေါ်များစွာ မူတည်နေပါတယ်။ အိမ်ထောင်လည်းကျပြီး အနာဂတ်မိသားစုဘ၀အတွက် အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့အခါ ၇င်သွေးယူမယ့် အစီအစဉ်လည်း ပါလာမှာပါ။
Parents. (2018). The Best Age to Get Pregnant. Accessed:9October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း. Accessed:9October 2018.
← အဆီပြန်တဲ့ ဦးေ၇ပြားပိုင်၇ှင်များအတွက်
နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေတဲ့ မိခင်လောင်းများအတွက် သွားေ၇စာ →